चौधरीको चतु¥याइ ! — News of The World
नेपालका वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चौधरी स्वयममा निकै ठूलो छातिका उद्योगपति हुन पाठकबृन्द ।
चाउचाउ र विस्कुट मात्र होइन, उद्योगका विविध क्षेत्रमा हात हालेका कारण र धेरै मुन्दुरलाई रोजगारी दिएका कारण मात्र चौधरी चर्चामा आएका होइनन्, पाठकबृन्द ।
नवलपरासीको गैडाकोट पाल्तीर प्रगतिनगर वल्तिर एउटा चौधरी गाउँ नै बनाएका आदरणीय उद्योगपति देशको प्रमुख दलको सिफारीसमा सांसद समेत भै सकेका हुन पाठकबृन्द । सांसद पनि किन नहुन पाठकबृन्द, उनलाई ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश परान भन्दा प्यारो छ ।’ हिजो ठूलै र मोटै चन्दा दिएका चौधरीले राजतन्त्र फाल्ने धृष्टता नगर भनेर यो देशको प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई भनेकै हुन पाठकबृन्द । नेपाली राजनीतिमा उखाने काका भनेर चिनिने काउरेड केपी शर्मा ओलीले बोलेको ‘ठेलागाडा घचेटेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने बोली पनि कतिपयले चौधरीसँगै जोड्छन पाठकबृन्द ।
यी जोडाइ र आकांक्षालाई मेट्ने गरी फागनुको मध्यमा चौधरीले चतु¥याई देखाए पाठकबृन्द । कामरेड केपीकै जोडवल र सपना साकार बनाउने रणनीति अनुरुप सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारी देशको राष्ट्रपति हुन पुगेको पनि सबैलाई विदितै छ । यिनै राष्ट्रपतिलाई उनै चौधरीले प्रमुख अतिथि बनाउनु स्वभाविक त थियो नै पाठकबृन्द । श्वासत धामको उद्घाटनमा जुन कुर्सी राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिन्, उही कुर्सी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गरे भनेर विचरा चौधरीको बद्ख्वाइ गर्न खोजियो रे पाठकबृन्द । आखिर कुर्सी कहाँ बिटुलो हुन्छ र ! शंकाले लंका डढाउन भएन नी पाठकबृन्द, अहिले त यूग नै फरक छ । तथापि चौधरीको चतु¥याइ र भित्री मनसुवा केही थियो भने परमेश्वरले जानुन् ।